मन्त्रिपरिषदमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटा सबैभन्दा बढी प्रभावी ! « Pahilo News
मन्त्रिपरिषदमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटा सबैभन्दा बढी प्रभावी !
प्रकाशित मिति :5July, 2018 11:00 am
काठमाडौं, २१ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा २४ जना मन्त्री छन् । दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका अनुभवीहरूको पनि कमी छैन यो मन्त्रिपरिषद्मा । त्यो हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद्मा अनुभवी मन्त्रीहरूको प्रभाव बढी हुनुपर्ने हो । तर, यो मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोचोटि मन्त्री भएका र पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रभावी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको मुख्य विश्वास पनि मन्त्री बाँस्कोटामाथि नै भएको बताइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा बाँस्कोटा बढी हावी देखिने मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए । मन्त्री बाँस्कोटा प्रभावी बनेका एकदुईवटा उदाहरण पनि ती मन्त्रीले सुनाए । केही दिनअघि नेपाल प्रहरीको एआईजी दरबन्दी कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घनीभूत छलफल चलिरहेको थियो । कतिपय विषयमा कुनै निर्णय गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका विषयगत समितिमा त्यस्ता प्रस्ताव पठाउने चलन हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासानिक समिति, गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सामाजिक समिति, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक, पूर्वाधार समिति र कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा विधेयक समिति रहेका छन् । बैठकको छलफलकै क्रममा धेरैजस्तो मन्त्रीहरूले एआईजी दरबन्दी कटौतीको उक्त प्रस्ताव पनि विषयगत समिति प्रशासन समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखे । तर, मन्त्री बाँस्कोटाले त्यो गर्न नहुने धारणा राखे । उक्त प्रस्ताव अब विषयगत समितिमा पठाउँदा आफूहरूको काम नै प्रहरी अधिकृतका आफन्तहरूलाई भेट्दैमा बित्ने, बिहानबेलुकी चलखेलका लागि नेतादेखि मन्त्रीहरूकोमा भीड बढ्ने भएकाले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने र तीन जना मात्र एआईजी राख्ने प्रस्ताव त्यही बैठकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा मन्त्री बाँस्कोटाले जोडका साथ बैठकमा राखे । मन्त्री बाँस्कोटाका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनका कुरामा समर्थन जनाए । र, एआईजी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव त्यही बैठकले पारित ग¥यो । अरू मन्त्रीहरू हरेको हे¥यै भए ।